हक्की र निडर ओली नेतृत्वको सरकार, किन बन्दैछ प्रभाव र पँहुच देखाउने नीजि क्षेत्रसँग लाचार ? – Mission Khabar
हक्की र निडर ओली नेतृत्वको सरकार, किन बन्दैछ प्रभाव र पँहुच देखाउने नीजि क्षेत्रसँग लाचार ?
मिसन खबर ९ आश्विन २०७५, मंगलवार ०४:०६
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको स्वभाव अन्य नेताको भन्दा फरक छ । कडा बोल्ने स्वभाव भएकाले उनी अधिकांश कुरामा अडान पनि उस्तै लिन्छन् । निडर र आँटिला उनै केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन् । कहिल्यै नझुक्ने बरु अरुलाई नै गलाउन र झुकाउन माहिर ओली नेतृत्वको सरकार भने अहिले उनी र उनको स्वभावको ठिक विपरित गतिमा अघि बढेको छ ।
सरकारका प्रायः निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै तोडिएका छन्, केही तोडिने क्रममा पनि छन् । दुई तिहाईको साथ पाएको शक्तिशाली सरकार निजी क्षेत्रसामू एकपछि अर्को गर्दै लम्पसार परिरहेको छ । आम नागरिक शान्ति सुरक्षाको स्वभाविक माग राखेर अनि कानुन विपरितका अपराध गर्नेलाई कारबाही गर भन्दै सडकमा उत्रिएको निक्कै लामो समय व्यतित भएको छ तर यसमा सरकारले कत्तिपनि चासो देखाएको छैन ।
बरु हत्या, हिंसा, अराजकता देशभर झन–झन झांगिदैछ । दण्डहिनता मौलाउदैगर्दा सर्वसाधारणको हितमा काम गर्नुपर्ने सरकार उल्टै उनीहरुकै लागि ढाडस बन्दैछ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धिसँगै यातायात भाडा समायोजनमा व्यवसायी सामु झुक्न बाध्य बनेको सरकार कामचोर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न पनि खुट्टा कमाइरहेको छ । देशभर विकास योजनाहरु ऋलपत्र छन्, ठेकेदार शक्ति, पँहुचका आधारमा बजेट निकासा गरेर रौस गरिरहेका छन् । न पुल समयमा, राम्रसँग बन्छ, न बाटो घाटो अनि सडक नै । बरु सरकार अभिभावकत्व निभाउन छाडेर मौनतामा रमाइरहेको देखिन्छ ।
हक्की अनि निडर भएर अडान राख्ने ओलीको नेतृत्वको सरकार किन उनी जस्तै बन्न सकिरहेको छैन । किन मन्त्री अनि सरकारले जनमुखी काम गर्न सकिरहेको छैन । समस्यामाथी समस्या बढ्दा पनि सरकार किन बेखबर ? अहिले आम सर्वसाधारण यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन् ।
चितवनमा एमालेको महाउत्सव, पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यमा कस्ले मार्लान त…
गोदावरीका लोकप्रिय मेयर महर्जन बन्लान त ललितपुर कांग्रेसका जिल्ला उप–सभापति…